Wun Zinn Comics မှာ မြန်မာဘာသာပြန် ဂျပန် ကာတွန်း နှင့် ကိုရီးယား ကာတွန်းများ၊ မြန်မာကာတွန်းများကိုလည်း MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Wun Zinn Comics အငှား ဝန်ဆောင်မှုမှာ မြန်မာဘာသာပြန် Korea Webtoon တွေနဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ကာတွန်းရုပ်ပြတွေ ကို လွယ်ကူစွာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကာတွန်းရုပ်ပြ အပိုင်းပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်တောင် ပါဝင်တာနော်။ 8537 ကို ON ဟုပေးပို့ပြီး အငှား ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါသည်။တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ်သာ ကျသင့်ပါမည်။ အသေးစိတ် သိလိုသည်များအတွက် 019339216 နှင့် 106 ကို ဆက်သွယ်ပါ။
Wun Zinn Comics မှာ ကာတွန်းစာအုပ်အငှား၊ အရောင်းဝန်ဆောင်မှု
မေး။ ။ ကာတွန်းစာအုပ် အငှားဝန်ဆောင်မှု ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဖြေ။ ။ အမျိုးအစားစုံလင်သော မြန်မာဘာသာပြန် Korea Webtoon များနှင့် မြန်မာရုပ်ပြများကို
Mobile App မှ တစ်ဆင့် ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်အောင် စီစဉ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
မေး။ ။ အငှားဝန်ဆောင်မှုတွင် မည်သည့်ကာတွန်းစာအုပ်များကို ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အငှားဝန်ဆောင်မှုတွင် ဘာသာပြန် Korea Webtoon တွေနဲ့ မြန်မာရုပ်ပြကာတွန်းတွေကို
အချစ်၊ ဟာသ ၊ သိပ္ပံနယ်လွန် ၊ သည်းထိတ်ရင်ဖို နှင့် သရဲတစ္ဆေ စာအုပ်များ စသည်ဖြင့်
ကာတွန်းစာအုပ်အမျိုးအစား စုံလင်စွာ ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မေး။ ။ ကာတွန်းအငှား ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေနဲ့ ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ကာတွန်းအငှားဝန်ဆောင်မှုကို Mobile App တွင် သော်လည်းကောင်း၊ SMS ဖြင့်သော်လည်းကောင်း MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Subscribe ပြုလုပ်ပြီး ငှားရမ်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါ သည်။
မေး။ ။ ကာတွန်းဖတ်ဖို့ ကာတွန်း အငှားဝန်ဆောင်မှုကို App ကနေ ဘယ်လိုရယူရမလဲ။
ဖြေ။ ။ Wun Zinn Comics App မှ အငှားဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိရန် Wun Zinn Comics Mobile App ကိုဖွင့်ပါ။ မိမိ၏ MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် အကောင့် Register လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပင်မစာမျက်နှာမှ “စာအုပ်စငှားရန်နှိပ်ပါ” ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်အငှားဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ စာမျက်နှာကို ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး “ဝန်ဆောင်မှုရယူမည်” ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုမှတဆင့်MPT ၏ SDP စာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး “T&C ကို လက်ခံပြီး ဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူမည်” ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် OTP Code ထည့်ရမည့် စာမျက်နှာတွင် 8537 မှ ပြန်လာသော ဂဏန်း (၄) လုံး OTP Code ကို ဖြည့်ပါ။ ကုဒ် မှန်ကန်ပါက 8537 မှ အငှားဝန်ဆောင်မှုရယူပြီးစီး ကြောင်းနှင့် သင်၏ဖုန်းမှ ဝန်ဆောင်ခ ဖြတ်တောက်သွားကြောင်း စာတိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး။ ။ ကာတွန်းဖတ်ဖို့ ကာတွန်း အငှားဝန်ဆောင်မှုကို SMS ကနေ ဘယ်လိုရယူရမလဲ။
ဖြေ။ ။ ကာတွန်းဖတ်ဖို့ ကာတွန်း အငှားဝန်ဆောင်မှုကို SMS မှ ရယူရန် ON ဟု 8537 သို့ SMS ပေးပို့၍ရယူနိုင်ပါသည်။
မေး။ ။ ကာတွန်းဖတ်ဖို့ ကာတွန်း အငှားဝန်ဆောင်မှုသည် အခမဲ့လား။ အခကြေးငွေ ပေးရပါသလား။
ဖြေ။ ။ ကာတွန်းဖတ်ဖို့ ကာတွန်း အငှားဝန်ဆောင်မှုသည် အခမဲ့မဟုတ်ပါ။ မိမိရယူထားသော အငှားဝန်ဆောင်မှုအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။
မေး ။ Wun Zinn Comics Mobile App မှ ကာတွန်းစာအုပ်များကို ဘယ်လို Download ရယူမလဲ။
ဖြေ ။ Wun Zinn Comics Mobile App မှ ကာတွန်းစာအုပ်များကို အငှားဝန်ဆောင်မှု ရယူပြီးပါက
ကာတွန်းစာအုပ်အပိုင်း (၃၀) ပိုင်း အထိ Download ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကာတွန်းစာအုပ်အပိုင်း (၃၀) ပိုင်း ကျော်သွားပါက Download ပြုလုပ်၍ မရနိုင်တော့ပါ။ ကာတွန်း စာအုပ်အသစ်များကို ဖတ်ရှုရန် Download ပြီးသော စာအုပ်အဟောင်းများကို ဖျက်၍ အသစ်အား Download ပြုလုပ်ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Free ပေးထားသော ကာတွန်းစာအုပ် များကို အငှားဝန်ဆောင်မှုရယူထားခြင်းမရှိသော်လည်း ဖတ်ရှု နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး။ ။ ကာတွန်းစာအုပ်ဖတ်ရှုရန် အငှားဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်း ရပ်တန့်လိုပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဖြေ။ ။ Wun Zinn Comics Mobile App နှင့် SMS ကိုအသုံးပြု၍ ကာတွန်းစာအုပ်ဖတ်ရှုရန် အငှားဝန်ဆောင်မှုကို Unsubscribe ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Wun Zinn Comics Mobile App မှ Unsubscribe ပြုလုပ်ရန် Wun Zinn Comics Mobile App ထဲသို့ ဝင်ပါ။ Side Menu ကို နှိပ်ပါ။ "ကိုယ်ပိုင်အကောင့်" သို့ သွားပါ ။ “အငှားဝန်ဆောင်မှုရပ်မည်” နှိပ်၍ "သေချာပါသည်” ကို ရွေးပြီး Unsubscribe ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Wun Zinn Comics Mobile App မှ အတွက် SMS မှ Unsubscribe ပြုလုပ်ရန် 8537 သို့ OFF ဟူသောစာသားကို SMS ပေးပို့၍ အငှားဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်ရန်လို အပ်ပါသည်။
မေး။ ။ ကာတွန်းအရောင်း ဝန်ဆောင်မှုတွင် မည်သည့်ကာတွန်းစာအုပ်များကို ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အရောင်းဝန်ဆောင်မှုတွင် ဘာသာပြန် Korea Webtoon ၊ Japan Manga တွေနဲ့ မြန်မာရုပ်ပြကာတွန်းတွေကို အချစ်၊ ဟာသ ၊ သိပ္ပံနယ်လွန် ၊ သည်းထိတ်ရင်ဖို နှင့် သရဲတစ္ဆေ စာအုပ်များ စသည်ဖြင့် ကာတွန်းစာအုပ်အမျိုးအစား စုံလင်စွာ ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မေး။ ။ ကာတွန်းစာအုပ်များ ဘယ်လိုဝယ်နိုင်ပါသလဲ ။
“စာအုပ်ဝယ်ဖို့ ငွေဖြည့်ရန်” ကို နှိပ်ပြီး ၊ MPT ဖုန်းဘေလ်ကို Wun Zinn Comics
အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ကာတွန်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မေး။ ။ အရောင်းကဏ္ဍထဲမှာ ဝယ်ယူထားသော ကာတွန်းစာအုပ်များကို မည်သည့်နေရာတွင်ဖတ်ရှုရမည်နည်း ။
ဖြေ။ ။ “စာအုပ်စင်” တွင် မိမိဝယ်ယူထားသော ကာတွန်းစာအုပ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ။
မေး။ ။ အဆင်မပြေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။
ဖြေ။ ။ Wun Zinn Comics - Hot Line - ၀၁၉၃၃၉၂၁၆ တို့ကို
နေ့စဉ် နံနက် ၉:၃၀ မှ ည ၁၁:၃၀ အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Comics Books Subscription ( Wun Zinn Comics )
Q - What is Wun Zinn Comics Book Subscription?
A - Users can rent or subscribe various categories of comics books in Myanmar Yote
Pya and Korea Webtoon with Myanmar Substitle.
Q - What kind of books can I Subscribe?
A - You can subscribe all kind ofacomic’s book both Myanmar Yote Pya and Korea Webtoon with Myanmar Subtitle in all categories such as Novel, Short story, Travel, Translation, Business, Self-Development, Romance, Articles, Mysteries and Ghost.
Q - How can I subscribe the Comics Book subscription?
A - You can subscribe Comics Books Subscription from Wun Zinn Comics Mobile
App and SMS with MPT Mobile Number.
Q - How can I subscribe the Wun Zinn Comics from Mobile App?
A - You can subscribe Wun Zinn Comics from Wun Zinn Comics Mobile App.
- Open Wun Zinn Comics Mobile App
-> Enter your MPT mobile number for account register
-> When you reach to Home Page Click “Subscribe Comics Books”
-> You will reach Landing page and Click “Subscribe”. Then you will reach SDP page and accept T&C to proceed subscription -> Insert OTP code that received form 8537 -> Then you will have received Successful Subscription message form 8537
-> After that you can rent or read the comics books.
Q - How can I subscribe the Wun Zinn Comics Books Subscription from SMS?
A - You can subscribe Wun Zinn Comics Books Subscription from SMS. Send ON for Comics subscription to 8537.
Q - Is Wun Zinn Comics Book subscription free of charge or paid service?
A - Wun Zinn Comics Books subscription is paid service with 99 kyats per day for subscription.
Q - How can I download Comics Books from Wun Zinn Comics Mobile App?
A - You can download Comics Book from Wun Zinn Comics Mobile App with (30) episodes’ limits. But you can listen new comics book’s Episodes after deleting old Episodes. You can also read free Comics Book’s Episodes without subscription.
Q - How can I unsubscribe the Wun Zinn Comics Books Subscription?
A - You can unsubscribe Wun Zinn Comics Book Subscription by using Mobile App and
To unsubscribe using ‘Wun Zinn Comics’ Mobile app,
Open Wun Zinn Comics App. Click “My Account” from side menu. Then click “Un-subscribe”. You will see double confirmation to un-subscribe pop up and Click “Yes” to un-subscribe.
To unsubscribe using SMS, send OFF for Wun Zinn Comics subscription to 8537.
Then you will be received successfully un-subscription SMS.
Q - What kind of books can I Buy?
A - You can buy all kind ofacomic’s book Myanmar Yote Pya and Korea Webtoon, Japan Manga with Myanmar Subtitle in all categories such as Novel, Short story, Travel, Translation, Business, Self-Development, Romance, Articles, Mysteries and Ghost.
Q - How can I buy comic books?
A - Click “To Buy Books” and by exchanging MPT Phone Bill to Wun Zinn Comics Bill.
Q - Where can I read downloaded books.
A - You Can Read downloaded books in “Library”
Q - How can I contact for any complaints?
A - Please contact these hotline – 019339216 between 9:30AM to 11:30PM.
ကာတွန်းစာအုပ် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။ Wun Zinn Comics ကာတွန်း အငှားဝန်ဆောင်မှု အကြောင်း
Wun Zinn Comics ကာတွန်း ဝန်ဆောင်မှုသည် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရသည့် ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။
အငှားဝန်ဆောင်မှုရယူသည့်နေ့မှ စတင်၍ တစ်ရက်လျင် ၉၉ ကျပ်နှုန်းဖြင့် နေ့စဉ် ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ အရောင်းဝန်ဆောင်မှုသည် စာအုပ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ အလိုက်ဝယ်ယူရသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ရယူပြီးပါက Wun Zinn Comics Mobile App တွင် ကာတွန်း စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အခကြေးငွေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း
ကာတွန်းအငှား ဝန်ဆောင်မှုသည် တွင် တစ်ရက် ကျသင့်ငွေ ၉၉ ကျပ်နှုန်းဖြင့် နေ့စဉ် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းဝန်ဆောင်မှုသည် စာအုပ်အပိုင်းလိုက် သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေးဖြင့် ဝယ်ယူရသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည် ။
(က) အခွန်ခအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍအသီးသီးအလိုက် အခကြေးငွေတို့ကို ပေးချေ၊ ကျခံရမည့်အပြင် အင်တာနက်အသုံးပြုခများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းလ် အော်ပရေတာတို့၏ သတ်မှတ်နှုန်းထားနှင့်အညီ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) SMS, Mobile Data အသုံးပြုခြင်း၊ ကြော်ငြာဝင်ကြည့်ခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် အင်တာနက် အသုံးပြုခ ကို သုံးစွဲသူမှ ကျခံရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိသဘောတူပါသည်။
အထက်ပါ အခကြေးငွေဖြင့် ရယူသည့် ဝန်ဆောင်ခအားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုရယူသူတို့ အသုံးပြုသည့်သက်ဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းလ်အော်ပရေတာ၏ ဖုန်းဘေလ်မှတစ်ဆင့် ပေးချေခြင်းကို မိမိအနေဖြင့် သဘောတူညီပါသည်။
(ဂ) သတိပြုရန်မှာ အခြားတစ်ယောက် (သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက မိမိဖုန်းကို ယူသုံး၍ဖြစ်စေ
(သို့မဟုတ်) မိမိဆင်းကတ်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အထက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲခအားလုံး
အတွက် သင့်ဖုန်းဘေလ်ထဲမှ အခကြေးငွေများကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မိမိအနေဖြင့်
အခြားတစ်ယောက်ယောက်မှ ပေးဆောင်နေပါက ယခုဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ
(ဃ) Wun Zinn Comics Mobile App နှင့် SMS တွင် အငှားဝန်ဆောင်မှု ရယူသည့်အခါ သို့မဟုတ် အရောင်းကဏ္ဍထဲမှ ကာတွန်းစာအုပ်အပိုင်းများ ဝယ်ယူရာတွင် ၊ မိမိကိုယ်တိုင် ရယူသည် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားရယူသည် ဖြစ်စေ၊ အပြန်အလှန် နှစ်ဦးသဘောတူ သိရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ မသိရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုကို ကျခံသည့် ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်သည် အထက်ပါ ဝန်ဆောင်မှု အခကြေးငွေများကို သိရှိထားပြီး တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
(င) Wun Zinn Comics အငှားဝန်ဆောင်မှုသည် တစ်နေ့လျင် (၉၉) ကျပ်ကို ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားသည့် MPT ဆင်းကဒ်ဖုန်းနံပါတ်မှ ဖုန်းဘေလ် နေ့စဉ်ဖြတ်တောက်မည်ကို သိရှိသဘောတူပြီးဖြစ်ပါသည်။
၄။ ကာတွန်းစာအုပ်များ ရယူနိုင်မှု
ကာတွန်းစာအုပ်အငှားဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော ကာတွန်းစာအုပ်များကို ဝန်ဆောင်မှု ရယူပြီးသည့်နေ့မှစ၍ နေ့စဉ် Wun Zinn Comics Mobile App တွင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်ခ မပေးချေခဲ့သည့် ရက်များတွင်မှု ကာတွန်းစာအုပ်များ ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ကာတွန်းအငှားဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော ကာတွန်းစာအုပ်များသည် Wun Zinn Comics ကာတွန်း အငှား ဝန်ဆောင်မှုမှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ကာတွန်း များကိုရယူပြီးနောက် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာအကျိုးအမြတ်အတွက် မသမာနည်းဖြင့် ထပ်ဆင့်ကူးယူ၊ ဖြန့်ဝေ၊ ဖော်ပြခြင်းများ မလုပ်ရပါ။
Terms and Conditions (Comic Books Subscription & Paid Service) – English Version
Comics Books Subscription isapaid service of Wun Zinn Comics. The Comic Books
subscription fee is 99 kyats per day. And you can buy comic’s books episodes.
2. Paid Comic Books Service
For Comic Books Subscription, you can subscribe every day and will be charged 99 Kyats per day. And you can buy comic’s books episodes by exchanging MPT phone bill.
3. Agreement of making payment and Your responsibilities
(a) You acknowledge and have to pay service charges including tax and all mobile data rate as the terms and conditions of Mobile Operators.
(b) You acknowledge and accept all mobile data charges such as SMS, ads, downloading data and our Audiobook subscription service charges to be deducted from your SIM’s main balance.
(c) Please be aware of the facts that all data and service charges will be deducted from current SIM card owner. It is your obligation that you have already an agreement from SIM’s owner if you use the other’s SIM card for our service fee.
(d) By using Wun Zinn Comics Mobile App, it is your responsibilities that you keep your SIM Card and Mobile Device since you are an authorized person to remotely access your mobile data and services in order to perform any tasks. When you get paid for our service by yourself or on behalf of others, we assume that both of you must have already an agreement for our services. If not, the SIM owner will take responsibilities for our service charges deducted.
(e) You acknowledge and agreed that by using Wun Zinn Comics Books Subscription, 99 Kyat per day per subscription would be deducted from your MPT mobile number.
4. Comic Books Subscription Content
You will be able to read Comic Books subscription content immediately after subscription is complete. You will get the Wun Zinn Comics subscription in daily basis. For the days that the operator couldn’t deduct your telecom bill for the subscription service, you will not get the Comics Books subscription content for those dates.
Comics Books subscription contents are owned by Wun Zinn Comics service. You are NOT ALLOWED to copy/use/provide illegally contents such as Comics Books subscription from Wun Zinn Comics service